फार्मेसी स्टाफका लागि अन्तिम मिनेट हेलोवीन वेशभूषा - चेकआउट | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी प्रेस स्वास्थ्य औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, समाचार घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर मनोरञ्जन कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी
मुख्य >> चेकआउट >> फार्मेसी स्टाफका लागि अन्तिम मिनेट हेलोवीन वेशभूषा
छुट्टीको मतलब यो होइन कि मानिस बिरामी हुन छोड्छ — वा उनीहरूको औषधि आवश्यक पर्दछ। धेरै चिकित्सा पेशेवरहरू जस्तै, फार्मासिष्टहरू र फार्मेसी टेक्निसियनहरू प्राय: उत्सवका दिनहरूमा काम गर्न अड्किन्छन्। यो तपाईंको समुदायको सेवा हो, तर यसले तपाईंको आफ्नो उत्सवहरूमा ड्याम्पर राख्न सक्छ।
कसरी toenail कवक १० मिनेट मा निको पार्ने
तपाईंले यस वर्ष हेलोवीनमा काम गर्नुपर्नेछ, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले सबै रमाईलो छोड्नु पर्छ। St१ औं तालिकाको लागि स्टाफ बीच पोशाक प्रतियोगिता सुरु गर्नुहोस्। वा, तपाइँको ग्राहकहरु लाई खुशी बनाउन एक समूह को रूप मा तैयार। यी अन्तिम मिनेट हेलोवीन पोशाकहरूलाई सँगै राख्नको लागि थोरै परिश्रमको आवश्यकता छ। र तिनीहरू पर्याप्त स्वादपूर्ण छन् तपाईंको कार्यस्थलमा कसैलाई अपमान गर्नबाट रोक्न।
१. चतुर प्यान्ट
Smarties क्यान्डी को एक झोला किन्नुहोस्, र आफ्नो नियमित काम प्यान्टमा क्यान्डी रोल संलग्न गर्न डबल-साइड टेप वा सुरक्षा पिन प्रयोग गर्नुहोस्। केहि नक्कल चश्मा र पुस्तकको साथ जोडी बनाउनुहोस्, र तपाईं धेरै पनी हुनुहुन्छ चतुर प्यान्ट ।
यो एक कारणको लागि क्लासिक पोशाक हो। मानिसहरू यी जोकरहरूलाई मन पराउँछन्। यदि तपाईं काउन्टरमा आफ्ना ग्राहकहरूबाट सँधै हाँसिरहनुभयो भने, यी सबैलाई केही थप अर्थ दिनुहोस् वरिपरि जोकर । रातो फोम नाकमा टस गर्नुहोस् इन्द्रेणी रंगको शर्टको साथ जोडी। अतिरिक्त रमाईलोको लागि एक ठूलो आकारको धनु टाई थप्नुहोस्। जति चम्किला र colorsहरू, त्यति नै उत्तम!
The. मसलाको केटीहरू (वा केटाहरू)
यदि तपाइँका सहकर्मीहरू खेलमा छन्, सबैलाई मनपर्दो मसला लिनुहोस्। मिलान प्रिन्ट गर्नुहोस् म्याकोर्मिक मसलाको लेबल , यसलाई रातो एप्रनमा पिन गर्नुहोस्, र VOILA! तपाईं पेपरिका हुनुहुन्छ ... वा जायफल ... वा दालचिनी। तल सबै कालो लगाउनुहोस्, र रातो वा कालो क्यापको साथ आउटफिट माथि शीर्ष।
C. काउबय ... वा लाम्बरजेक
यदि तपाइँ फ्लानेल शर्ट पाउनु भएको छ भने, तपाईं धेरै जसो त्यहाँ हुनुहुन्छ। पश्चिमी शैलीको लागि काउभय टोपी, बन्डाना, र बुटहरू थप्नुहोस्। वा, पूर्ण गर्नका लागि निलम्बकहरू, एक बनी, र एक घरगुती कार्डबोर्ड कुल्हाडी संयोजन गर्नुहोस् पल Bunyan हेर्न ।
Wal. वाल्डो कहाँ छ (वा Wenda )?
रातो र सेतो धारिलो माथि — वा रातो शर्ट बाहिर फेसन एक लगाउनुहोस् र केही तेर्सो रूपमा लागू सेतो डक्ट टेप। रातो र सेतो बुनिएको टोपीलाई पोम पोम, वा सँग उठाउनुहोस् एउटा भेडा वा महसुस गरेको बनाउनुहोस् । तपाईंको घाँटी वरिपरि केही कालो फ्रेमहरू, र क्यामेरा थप्नुहोस् र तपाईं यस ब्लेन्डिंग इन मास्टरमा रूपान्तरण गर्नुभयो। बोनस: यो तपाईंको सेतो ज्याकेटको साथ जान्छ!
Dev. बनाईएको अण्डा
अर्डर गर्नुहोस् अन्डा-मुद्रित टी-शर्ट (यदि तपाईं अन्तिम मिनेट सम्म कुर्नुभयो, अमेजन प्राइमको साथ दुई-दिन शिपिंग छ)। यसलाई ए संग जोडा बनाउनुहोस् सीs्ग हेडब्यान्ड यस स्वादिष्ट गर्मी बार्बेक्यु स्न्याकको हेलोवीन अनुकरणको लागि।
तपाईंको पुरानो स्नातक को बाहिरी पोशाक बाहिर तान्नुहोस्। एउटा खेलौना गेभल र एक लेस कलर थप्नुहोस्, र तपाईं सजीलै आफ्नो मनपर्ने अदालत न्यायको रूपमा जान सक्नुहुन्छ - त्यो हो कि न्यायाधीश जुडी वा कुख्यात आरबीजी । जब पर्खाई क्षेत्र भीड हुन्छ, काउन्टरमा ट्याप गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, अदालतमा अर्डर गर्नुहोस्!
यदि तपाईं सँग कालो र सेतो धारीदार शर्ट छ भने, तपाईं राम्रो बाटोमा हुनुहुन्छ धेरै सजीलो पोशाकहरूमा। बन्नको लागि माइम , केहि सेतो पन्जा, कालो आँखा श्रृंगार, र रचनात्मक इशाराहरू जोड्नुहोस् — सोच्नुहोस्: बक्समा फन्दा। एक मा रूपान्तरण गर्न समुद्री डाकू , तपाईंको छाती जेबमा बस्न एक आँखा प्याच र भरिएको पशु तोता जोड्नुहोस्। एक आँखा मास्क र कालो टोपी जोड्नुहोस्, र तपाईं एक डाकु हुनुहुन्छ। सम्भावनाहरू केहि रचनात्मक उपकरणहरूको साथ लगभग अनन्त छन्।
Ros। रोजि द रिभटर
रातो बन्दनाको साथ एउटा chambray शर्ट जोडी गर्नुहोस्। त्यसो भए आफ्नै DIY बनाउनुहोस् हामी यसलाई पिन गर्न सक्छौं ! WWII को समयमा महिला कामदारहरूको लागि यो प्रतिमालाई श्रद्धांजलि तिर्नुहोस् जब तपाईं एक दिन रमाइलोको दिनमा तपाईंको समुदायको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ।
१०. तपाईंको मनपर्ने पाल्तु जनावर
तपाईं हेलोवीन बिहान काममा नभएसम्म तपाईं बिर्सनुभयो भने पनि, तपाईं अझै पनि यसलाई बाहिर तान्न सक्नुहुन्छ। कालो अनुहार पेन्ट क्रेयोन वा आँखा लाइनर पेन्सिल समात्नुहोस्, र व्हिसकर र नाकमा खिच्नुहोस्। निर्माण पेपरबाट कानको एक जोडी काट्नुहोस्, र तिनीहरूलाई सस्तो हेडब्यान्डमा संलग्न गर्नुहोस्। बिरालो वा कुकुरमा रूपान्तरण गर्न सजिलो छ।
तपाईले रोज्नु भएको पोशाकले फरक पार्दैन, आफ्नो कार्यस्थलको हेलोवीन नीतिहरू भन्दा पहिले जाँच गर्नुहोस्। तपाईं टु-टु-टु-को देखि सजिएको देखाउन चाहनुहुन्न, केवल यो बताउनको लागि कि ड्रेसिंग गर्न अनुमति छैन। यसलाई सरल राख्नुहोस्, र उपयुक्त काम गर्नुहोस्। जान्नुहोस् कि तपाईं ग्राहकहरूसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। हल्का हृदय र रमाईलो कसैको दिन उज्यालो बनाउन सक्छ। त्यसो भए, स्पूकी रमाईलो (र केही क्यान्डी) को मजा लिनुहोस्!
9 बन्धन को लागी सर्वश्रेष्ठ स्प्रेडर बारहरु: तपाइँको क्रेता को गाइड
प्रति महिना इन्सुलिन कति लाग्छ?
बीमा 2019 बिना डाक्टर भ्रमण को औसत लागत
latuda मस्तिष्क लाई के गर्छ
वियाग्रा के हो र यो कसरी काम गर्दछ
जब तपाइँ फ्लू पाउनुहुन्छ तपाइँ कहिले सम्म संक्रामक हुनुहुन्छ
कति समय सम्म जन्म नियन्त्रण प्रत्यारोपण प्रभावी छ
कुन भाइरसहरु अहिले वरिपरि घुमिरहेका छन्